Vin Number Ukucinga
Uthi bewazi ukuthi Number Vin on imoto noma iloli ingaphezu nje kweqembu abalingiswa okubizwa imoto. Inombolo Yakho VIN kuyinto 17 amadijithi yakhiwa izinhlamvu nezinombolo ezitholakala imoto ukuthi une noma ucabangela ukuthenga. Ngokwenza a Ukubheka inombolo VIN ungakwazi umkhondo imoto emuva lapho futhi uma wawenziwe futhi eziningi ulwazi ezibaluleke kakhulu.
Inombolo VIN lakho imoto yakho like a imilobo yeminwe ukuze abantu, akukho izimoto ezimbili eyodwa efanayo. Ungase umangale ukuthola ukuthi nakuba imoto yakho lapha e-United States kungenzeka ziye eyenziwe Mexico, Canada noma mhlawumbe ngisho zithunyelwa yonke indlela kusuka Japan, Germany, Korea noma eziningi kwamanye amazwe ezivela emhlabeni jikelele.
Uma ugijima inombolo VIN (futhi wazi umbiko umlando auto) umhlinzeki usebenzisa empeleni kuveta inombolo VIN futhi akutshele lapho wakha imoto, ngubani umenzi kuyinto, noma cha it has windows manual noma amandla nesihluthu, usayizi injini futhi yini nohlobo yokudlulisela. Futhi, uma ugijima a Ukubheka inombolo VIN ungase futhi sithole ukwaziswa okwengeziwe ezifana ukufundwa odometer phakathi abanikazi, noma cha imoto iye owake wantshontsha, uma imoto owake waba uzamcolo kwacekeleka phansi, futhi uma kukhona uyakhumbula zamanje ezihlobene ukuthi imoto ethize. Ungakwazi ngisho ukuthola uma kukhona lien imoto, uma owake repossessed, noma uma owake waba ukulahlekelwa inani yinkampani yomshuwalense.
Hlola Number My Vin
Ngakho manje kungenzeka yini uzibuze “kanjani Ngibheka inombolo yami VIN”? Ngenhlanhla ne internet, kuba kahle kulula. Isinyathelo sokuqala ukuba uthole Inombolo VIN wemoto. Zonke izimoto namaloli babe VIN sihleli obuncane metal phezu dash ohlangothini abashayeli ukuthi ungabona ngokubheka ngokusebenzisa phambi somoya. Ngaphezu kwalokho, abanye abakhiqizi futhi abeke inombolo VIN ngaphakathi kweminyango, ngaphansi hood futhi ngezinye izikhathi on the lid emphemeni noma umzimba. An inothi ezibalulekile: ungase uphawule umbhangqwana panel ukuthi izinombolo VIN akufani. Lokhu akusho ukuthi imoto eyebiwe. Kungenzeka kube engozini kanti inkampani yomshuwalense avunyelwe for izingxenye esetshenziswa ibekwe imoto esikhundleni brand abantu abasanda. Nokho, uma ungenawo bethola imoto futhi has konke ezahlukene VIN izinombolo kuwo wonke panel, ukubheja yakho engcono kakhulu ukuhlala kude ukuthi imoto ethile.
Landelayo kunjengoba elula njengoba uya computer yakho futhi uya online. Kukhona izinkampani eziningi elihle ezinikeza isheke imoto VIN. Thola inombolo VIN isheke service ukuthi youtrust noma abangane bakho batusa bese umane ufaka inombolo VIN ebhokisini elifanele, kungcono ukuthi lula. The ngokuphelele free VIN amasheke kuvame Vin decoders nokunikeza ulwazi mayelana imoto futhi imishini Kwathi kusukela umenzi.
Uma wenza kanjalo a VIN khulula inombolo search ezovela wena unyaka, ukwenza kanye imodeli kanye injini kanye neminye imininingwane ebalulekile, ungaqhubeka umbiko umlando imoto egcwele ngazo kuyokwembula izimpikiswano ezinkulu mechanical, Izinkinga odometer, uma imoto ibilokhu engozini njalonjalo.
Ngokuhlola inombolo VIN, kungasindisa wena esiningi, ikhanda kanye nosizi. Abantu ngeke iqiniso ngaso sonke isikhathi uma kuziwa ukuthengisa imoto yabo esetshenziswa. Ngokwenza isheke inombolo VIN, kungenza umehluko emhlabeni phakathi kokuba imoto eyokusiza kahle, noma kokuba imoto ukuthi kubiza umcebo encane futhi ukuthi ufisa ungase ukuqeda.
Thola Cheap Vehicle Umbiko Umlando Lapha